Fidinana faobe eny ifotony – Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara
Formation des VOI-MV
Ny valala sy ny mombamomba azy
IFVM sy ny ady amin’ny valala
Dingana arahina amin’ny famonoam-balala
Fiaraha-miasa amin’ny VOI-MV
Ohabolana Malagasy momba ny Valala
Ny valala ao amin’ny Baiboly
Ny mason’ny valala
Les espèces dangeureuses à Madagascar
Bureau siège Mitsinjo Betanimena Toliara
Station autonome pour relevé météo
Prospection intensive et extensive
Vondron'Olona IfotonyMiady amin'ny Valala
Fidinana faobe eny ifotony
Ao anatin’ny fotoam-piadiana tanteraka ny Ivotoerana Famongorana ny Valala eto Madagasikara amin’izao ary tafiditra indrindra anatin’ny vanim-potoana mampisy ny valala isika noho ny toetr’andro mifanaraka tsara amin’ny fipoirany.
Manoloana izany, ho fijerana ny toe-java-misy eny ifotony dia nanatanteraka fidinana faobe ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Ivotoerana, izay nataon’Atoa Tale Jeneraly, ny Talen’ny serasera sy ny fifandraisana ary ny Tale teknika sy ireo delegasiona niara-dia tamin’izy ireo.Toerana maromaro no notsidihana ao anatin’ny faritra fitomboan’ny valala dia ny faritra Atsimo Andrefana, Androy, Anosy ary Menabe. Maro anefa ny sedra nolaovana : lalan-dratsy sy fiakaran’ny renirano, tsy laizaina intsony ny tsy fandriampahalemana, nefa toa zary fiainan’ireo mpamono valala izany. Nisy ny dinidinika sy fametrahana ny paik’ady matotra ho entina hanatanterahana ny asa famonoam-balala izay niarahana tamin’ireo lehiben’ny fari-piandidiana arovana @valala. Isaorana hatrany ireo tantsaha izay miara-mifarimbona amin’ny IFVM amin’ny famonoam-balala.
Amin’ny ankapobeny dia mbola voafehy tsara ny ady amin’ny valala amin’izao fotoana izao na dia eo aza ny fahasarotana tsy maintsy sedraina. Mampanantena ireo tompon’andraikitra fa hanao izay tratry ny heriny hatrany hahatontosana ny asa; mba hitazonana hatrany ilay teny faneva hoe « Famonoam-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mandroso »
Famonom-balala voafehy, fambolena sy fiompiana mahomby
← Vehivavy DRAEP Atsimo-Andrefana mankalaza ny 08 Martsa 2019
Campagne antiacridienne difficile →
Fampahafantarana ny IFVM
Ady amin'ny valala 2013-2018
Droits d'auteur © 2020 Ivotoerana Fomongorana ny Valala eto Madagasikara.